Inqubomgomo Yobumfihlo kanye nenqubomgomo Yekhukhi | RayHaber | Isitimela | Umgwaqo omkhulu | ikhebula imoto
IkhayaRayHaber | Izindaba Zezindaba Zesitimela Zasemigwaqweni Yezitimela Ezihamba ngezinyawo nezitimelaInqubomgomo Yobumfihlo kanye nenqubomgomo ye-Cookie
Inqubomgomo Yobumfihlo kanye nenqubomgomo ye-Cookie
RayHaber Uyemukelwa kuwebhusayithi,
Isivumelwano esilandelayo "Sokugcina Imfihlo", RayHaberilawula ukuhlinzekwa kwemininingwane nezinsizakalo ezinikezwe abasebenzisi bethu abanolwazi.
RayHaber Noma imuphi umsebenzisi ongena noma egcwalisa amafomu kwiwebhusayithi uzothathwa ngokuthi afunde futhi wamukela izinhlinzeko ze- "Imininingwane ye-copyright", "nenqubomgomo yobumfihlo" kanye nemibandela yokusebenzisa ye-Şartlar ..
RayHaberKwangathi sisebenzisa imininingwane eqoqwe kubasebenzisi ababhalisile nabavakashile abavakashela iWebhusayithi yaluphi uhlobo lokuhlaziya RayHaber yabelana ngalolu lwazi nabalingani bebhizinisi. Noma kunjalo, i-imeyili kanye neminye imininingwane yomuntu uqobo ngeke kwabelwane ngayo nanoma yimuphi umlingani, inkampani, inhlangano noma enye inhlangano ngaphandle kwemvume yomsebenzisi.
RayHaber i-imeyili, igama, isibongo, inombolo yocingo kanye nanoma imiphi imininingwane efakiwe ngesikhathi sokubhalisa ngeke ishicilelwe kwi-Web site yabasebenzisi ababhalisile nabavakashi;
RayHaber I-3 izodalula imininingwane yakho yangasese ngaphansi kwezimo ezilandelayo zomthetho nezinqubo zomthetho. kuvula amaphathi.
a.) Uma kukhona isicelo esibhaliwe esivela eziphathimandla zomthetho,
b.) RayHaberukuvikela kanye nokuvikela amalungelo empahla yendawo
c.) Ngokuvumelana nemithetho oyamukelayo ngaphansi kwemigomo yokusetshenziswa.
RayHaberImininingwane yakho egcinwe ngaphakathi ibonakala kuwe kuphela. Lolu lwazi aluthengiswa, aluqashiwe noma lushintshwe nesinye isikhungo noma inhlangano. Ngaphandle kokuthi kuhlinzekwe kulesi "Sivumelwano Sokugcina Imfihlo", 3. hhayi kwabelwane nabantu. RayHaber kuthatha zonke izindlela ezingaba khona ukufeza imibandela ethenjiswe kule nkontileka.
RayHaber imininingwane egcinwe endaweni okungeyona eyomphakathi. RayHaberisebenzisa zonke izinhlobo zamazinga embonini ukuvikela imininingwane emvelweni.
Unelungelo lokuvuselela futhi uguqule noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu olufaka ngesikhathi sokubhalisa nganoma yisiphi isikhathi. RayHaber unelungelo lokususa noma ukumisa i-akhawunti yakho uma wehluleka ukuhambisana nalesi “Sivumelwano Sokugcina Imfihlo” kanye “NeSivumelwano Sesevisi”.
Ngenxa yohlobo lwe-Intanethi, imininingwane ingasatshalaliswa kwi-Intanethi ngaphandle kwezindlela zokuphepha ezanele futhi ingatholwa futhi isetshenziswe ngabantu abangagunyaziwe. Umonakalo odalwe yilokhu kusetshenziswa nokusetshenziswa RayHaberakuwona umthwalo we.
Kwezinye izimo, ulwazi olungelona lomuntu siqu lungase luqoqwe. Isibonelo salolu hlobo lwolwazi uhlobo lwesiphequluli se-inthanethi oyisebenzisayo, isistimu yakho yokusebenza, igama lesizinda lesayithi oye wafinyelela kusiza sethu ngesixhumanisi noma isikhangiso.
Ulwazi lungenziwa kukhompyutha yakho uma uvakashela iSayithi. Lolu lwazi luzobe lufomathi yocingo lwe-cookie noma ifayela elifanayo futhi lizosisiza ngezindlela ezimbalwa. Isibonelo, amakhukhi azosisiza ukuba sihlele amasayithi nezikhangiso ngokusho kokuthandayo kanye nezintandokazi zakho. Cishe zonke iziphequluli ze-intanethi zinokukhethwa kokususa amakhukhi kusuka ku-hard drive yakho, uzivimbele ukuba zingabhaliwe, noma zithole umlayezo wokuxwayisa ngaphambi kokuba zilondolozwe. Sicela ubheke amafayela omsizi wesiphequluli sakho nolwazi lokusebenzisa ngolwazi oluthe xaxa.
Ikheli lakho le-IP lisetshenziselwa ukugcina i-Web Site namaseva ethu egijima njalo, ukuphatha nokuxazulula izinkinga. Ikheli lakho le-IP lisetshenziselwa ukukukhomba.
Le Webhusayithi inikeza izixhumanisi kwamanye amawebhusayithi. Ukuyimfihlo kuvumelekile kuphela kuleWebhusayithi YeWebhu futhi akuhlanganisi amanye amawebhusayithi. Inqubomgomo Yobumfihlo Nemigomo Yokusetshenziswa kwamasayithi ahlobene nokusetshenziswa kwezixhumanisi kule webhusayithi kanye namanye amawebhusayithi okumele asetshenziswe ayasebenza. Kunconywa ukuba ufunde Inqubomgomo Yobumfihlo neMigomo Yokusebenzisa yalawo mawebhusayithi kwamanye amawebhusayithi owahamba nalesi sixhumanisi kusuka kule Nwebhusayithi.
Ukwaziswa komuntu siqu noma yenkampani, amakheli e-imeyili, izibalo kanye namaphrofayli abavakashele amakhasimende ethu abasebenzisa ingqalasizinda yethu ayabelwe nabesithathu nganoma iyiphi indlela.
Ama-Logs aseMasayithi agcinwa eyimfihlo ngaphandle kwezicelo ezingenziwa yiziteshi ezisemthethweni (i-Office yomshushisi womphakathi, i-Security Informatics Bureau). Ukufinyelela izingodo kugcinwa phakathi nezinsuku ze-180.
Izimvo zezivakashi, imininingwane yobulungu besivakashi, imininingwane yokuvakasha (i-IP, i-timestamp, i-useragent) zigcinwa ziyimfihlo kufaka phakathi abasebenzi beNews System.RayHaber inelungelo lokushintsha noma yiluphi ulwazi olukulo mbhalo. Ngokusebenzisa leli sayithi, uthathwa njengolwamukele noma yiluphi noma yiluphi uguquko kule "Isiqinisekiso Sobumfihlo".
Amalungelo obunikazi azo zonke izinhlobo zokuqukethwe njengekhodi, izindaba, izithombe, izingxoxo RayHaber.com. RayHaberZonke izindatshana, izinto zokwakha, izithombe, amafayela alalelwayo, ukugqwayiza, amavidiyo, amacebo nokuhlelwa kusayithi le .com kuvikelwe ngumthetho welungelo lobunikazi i-5846. lezi RayHaber.com kungenzeka ingakopishwa, isatshalaliswe, iguqulwe, ishicilelwe nganoma iyiphi indlela ngaphandle kwemvume ebhaliwe ye .com. Ukukopisha nokusebenzisa akunakwenziwa ngaphandle kwemvume nangaphandle kokusho umthombo.
RayHaberIzixhumanisi ezingaphandle ku- .com zivulwa ekhasini elihlukile. Ababhali banesibopho sezindatshana ezishicilelwe namazwana. RayHaber.com ingashintsha nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kokuqaphela. Asinazibopho zanoma yimaphi amaphutha abangelwa imininingwane kuleli sayithi.
Zonke izixhumanisi zangaphandle esizeni zivulekile ekhasini elihlukile. RayHaber.com ayithwali umthwalo wokuxhumeka kwangaphandle.
RayHaber ihlonipha ubumfihlo bakho nezivakashi zakho futhi ithembisa ukulandela imithetho ebekwe kokulandelayo.
© Copyright 2019 RayHaber.com wonke amalungelo agodliwe.
Izitimela zaba inqubomgomo yombuso
Isivumelwano Sokuxoxisana Ngokubambisana sabhaliswa ku-İzmir Metro